Condom အသုံးပြုနည်းကို ဘယ်လိုလေ့လာနိုင်မလဲ? – BurmeseHearts
Condom အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင် ရာဘာအမျိုးအစား ကောင်း ၊မကောင်း ၊ ရက်လွန်ရာဘာဖြစ်နေလား ဆိုတာတွေကိုတော့ မသုံးခင် စစ်သင့်သည်။ ထို့အပြင် ရာဘာသုံးထားပေမယ့် သုတ်လွှတ်ပြီးတာနှင့် မိန်းမကိုယ်အတွင်းမှ ထုတ်ပစ်ရန်လည်း အရေးကြီးပေသည်။ နောက်ထပ် အလေးထားသင့်သောအချက်မှာ လိင်တံဖြင့် ထိတွေ့ထားသော လက်ချောင်းများဖြင့် ရာဘာစွပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချက်များသည် ရာဘာသုံးလျက်နှင့် ကလေးရရှိသွားနိုင်သော အချက်များဖြစ်သည်။
အမျိုးသမီးရော အမျိုးသားပါ နှစ်ဦးစလုံး တပြိုင်တည်း Condom သုံးလို့ရသလား?
BurmeseHearts	 Jun 18, 2015 0